Jacaylka xayawaanka - sababta aan u jeclahay dinosaurs aad u badan
Daryeelka iyo kharashyada qashinka sida xayawaanka
Waxay u egtahay in ay tahay isbeddel buuxa oo eyda ama bisad gebi ahaanba soo baxday. Hadda qoysaska Jarmalka ee raaxaysiga iyo caruurteena waxay hadda doonayaan dameer, gecko ama tarantula.
Waxa kaliya ee aan ku faraxsanahay in aan gariirno madaxdeena dhab ahaantii waa ikhtiyaari iyo bedelka xayawaanka caadiga ah. Haa, ka dib oo dhan, waxaad leedahay xayawaan aad u khaas ah gurigaaga. Laakiin runtii waa xayawaanka dhabta ah ee ku haboon qoyska carruurta leh ama dhammaantood?
Miyuu xeryaha ku habboon yahay xayawaanka guryaha loogu talagalay?
Waa wax cajiib ah, laakiin dhoobo ama noocyo kala duwan oo qallalan ayaa noo xiiso leh, malaha sababta oo ah waxay na xusuusinayaan waqtiyo fog-la iloobay.
Intaa waxaa dheer, waxay gebi ahaanba ka duwan yihiin dabeecadooda, u dhaqmid si aad ah liddi ku ah xayawaanka la og yahay iyo sidoo kale muuqaal muuqaal ah.
Haa, xamaara waa xayawaan aad u fiican. Laakiin miyuu ku habboon yahay xayawaanka? Iyo caruurta?
Ma inaan iibsannaa xaaqin?
Ka hor intaadan ka fikirin inaad iibsato xamaarad, sida bambeelo ama gecko, waa inaad ka warqabtaa waxyaabaha qaarkood.
Marka hore, xayawaanku waa mid aan firfircooneyn oo dabiiciga ah oo nagu filan oo nagu soo jiidanaya. Haddii aadan ku qanacsanayn muuqaalka xayawaanka joogtada ah, ma noqon doontid inaad ku qanacdo iyaga muddo dheer. Reeraha oo kaliya ayaa guuraya marka ay jiraan wax la cuno. Bishii soomanaa oo fiicnayd sida ugu dhaqsiyaha badan.
Noocyada qorraxda qaarkood ma xitaa hal mitir maalintii oo haddii ay sidaas tahay, markaa kaliya haddii aynaan arkin. Carruurta, gaar ahaan, waa in si dhakhso ah loola tacaalay gecko.
Iyada oo xamaarad aanad jajabin karin, ku socon karin ama socon karin. Sidoo kale, xayawaanka marna lama soo jiidan doono bini-aadanka. Uma baahnid wakhti iyo tamar si aad u baratid khiyaanadaas, marnaba ma baran doono.
Midabaynta bogsashada bogga - Midabaynta bogga bogga
Sidoo kale, xayawaanku marna ma laha baahida loo qabo dhawaansho ama aad jeclaan lahayd in lagaa qaado. Ma raadiso dareenkaaga. Taas bedelkeeda, ka soo bax ciribtirka, waa la wiiqi doonaa oo waligeed ma baraneyso inaadan waxba ka qaban.
Reeraha waa qaali, oo ma ahan kaliya marxaladda soo iibsiga. Qiimaha tamarta korontada ee loo isticmaalo nalalka kuleyliyaha waa in lagu xisaabiyaa. Intaa waxaa dheer, terrariums wanaagsan qiimo boqolaal euros, accessories sidoo kale iyo feed ayaa ku garaaci karaa bil walba leh 50 Euro si aad u hesho.
Haddii aadan runtii ku qanacsaneyn xeryaha, mararka qaarkoodna raadi xiiso, waa inaadan iibsan xayawaanka. Intaa waxaa dheer, raxmadda dhammaan noocyada kala duwan kuma jiraan carruurta. Inkasta oo dharbuunku uusan cabsanayn marka yar ee Hugo ay ka qaadato qolka fadhiga beerta, iyadu kuma dhici doonto jacaylka.
Pony Barashada sida Pet & Riding | Xayawaanka
Barkaddayda iyo aniga iyo barkadeyda - in ka badan daryeel caafimaad oo keliya
Khamriga sida aphrodisiac - erotic
USA Travel - Maraykanka ayaa ah meel u safreysa
Si haboon u ilaalinta bakaylaha - xayawaanka raba